Japan: Fisintahan’ny mpizahatany Japoney an’Italia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Aogositra 2009 22:46 GMT
Lazaina fa nihena ny isan'ny mpizahatany Japoney nandalo an'i Roma faramparany teo. Tsy noho ny krizy ekonomika ihany fa eo ihany koa ny tolotra ratsy ataon'ny trano fisakafoanana sy fandraisam-bahiny italiana ary ny tahotra ho voaendaka valizy sy finday nahatonga ny Japoney hisafidy toeran-kafa voaary kokoa.
Vao herinandro vitsivitsy izay no nisy ity vaovaon'ny fanambakana nataon'ny trano fisakafoanana malaza iray ao afovoan-tanànan'i Roma tamina olon-droa miaraka Japoney fa 700€ be izao no vidin-tsakafo tsotra. Efa manomboka leon'ny fampiheverana azy ho (ombivavy be ronono) mpizahantany fanambaka ihany koa ny Japoney.
Nanazava izay nitranga sy namoaka lahatsoratra hoe “Tsy andeferako mihitsy izao” (絶対に許せない！！) i Moshimoshi, tale Japoney ao amin'ny B&B ao Rome izay nampiatrano ireto mpivady sendra ny vitan-dratsy ireto.
Nankany amin'ny polisy aho androany.
Nisy tratran'ny fanambakana ny mpanjifako sasany ary dia tonga tany aho hanamarina izany.
Raha hazavaina tsotra ny fandehan'ny hosoka, dia niharan'ny fandoavam-bola tafahoatra nahatratra 700 Euro (100.000 Yen) tamina sakafo indray mandeha izy roa.
Azonao inoana ve izany? 700 Euro!!!
Tsy azoko ileferana izany! Ary dia nankany amin'ny polisy aho nanao tatitra. Ankoatra izany, voasoratra ao amin'ny boky torolalana manazava amin'ny teny japoney fa ny tolotra dia mora!’. Ekena fa tsy nijery ny sakafo anio (menu) no sady tsy nanontany tamin'ny trano fisakafoanana hoe inona no torohevitra ataon-dry zareo saingy ilay 700 euro kosa…
Niteny tamiko ny Italiana hoe “Naninona ry zareo no nandoa?”
Nefa hevero kosa ange, afa-mivoaka ny restaurant tsy mandoa ny vola vidin'ny nohaninao angaha ianao? Na nitaraina ihany koa aza aho, mety tsy hahay handeha tsy mandoa vola izany.
Ary dia niteny tamiko ry zareo hoe “Ka izay indrindra no mahavoambaka ny Japoney koa!!”
Saingy, azonao leferina ve izany? mety amin'ity vahoaka ity ao an'eritreriny fa “ rehefa tsy mitaraina ry zareo dia azoko ambakaina izay”? Hotoheriko tanteraka izany fomba fisainana izany satria mino aho fa tsy azoko atao ny mandefitra amina toe-javatra sahala amin'izany. Nampanantena moa ilay polisy androany fa havesabesatra ny onitra miandry ilay trano fisakafoanana. “Izaho amin'ny maha-italiana ahy, dia tsy hanaiky velively fa hitondra fahatsiarovana ratsy avy eto Italia izy ireo! Henatr'i Italia ireo olona ireo!!”.
Na izany aza dia nampitandrina ny mpamaham-bolongana Japoney iray mba tsy hieritreritra fa toy ny any Japana ihany ny hatsaran'ny tolotra any ampitan-dranomasin-dry zareo.
Tsy gaga aho.
Tsy atao mahagaga amin'izao fitotongan'ny toe-karena izao raha mihena ny Japoney mizaha tany ary tsy zava-baovao na vao haingana ihany koa ny lazain'ny Japoney fa “fikarakarana ratsy ataon'ny Italiana”…
Etsy ankilan'izany, tsy any Italia ihany no misy “ratsy fikarakara”.
Andaniny… Mihevitra aho fa misy fiheverana diso tanteraka hoe “rehefa miampita ranomasina aho, dia mitovy amin'ny eto Japana ihany ny fikarakarana any.”
Amin'izay fotoana izay, dia hihanjahanja tanteraka fa be ny fifahasamihafana eo amin'i Japana sy ny firenenkafa.
Ny atao hoe fikarakarana eto Japana dia “vita tsy misy fitenenana indraimbava ny zava-drehetra.” (Araka ny fomba fiteny hoe, “Andriamanitra ny mpanjifa”…)
Fa any ielany kosa (misy mieritreritra fa) ny fikarakarana “dia ny fahatontosan'izay noteneniko fa notadiaviko”.
Ary dia maro ny fahasamihafana tahaka izany, raha mivoaka mankany ivelany tsy mahalala…
[…]Ary henatra ho antsika Japoney mivoaka any ivelany raha tsy mahatakatra izany fahalalàna bitika izany!
Indrisy fa tsy zava-baovao ho an'ny Italiana ny fanambakana vahiny any. Indrindra fa amin'ireo tanàna miankna amin'ny fizahantany tahaka an'i Roma.
Tsy tamin'ity indray mandeha ity, fa tsy dia menatra loatra ny Italiana na dia heverina erantany aza fa mpanambaka matevin-koditra ao an-tranon'i Colosseo.
Maneho ny alahelony amin'ity lohahevitra ity ny mpamaham-bolongana Italiana iray ao amin'ny L'isola dei riottosi.
Ny tanantsika ihany no mamotika antsika. Araka ny filazako matetika dia efa zava-mahazatra antsika ny hafetsifetsena. Ka miitatra any amin'ny fizahantany ny fahavoazana aterany. Voa dia voa tokoa.
Raha raisina manokana izao dia maty sasaka noho ny tamin'ny 1997 ny mpizahatany Japoney. Nahoana? Noho ny loton'ny tanàna ary lasa bizina mandeha ny fanambakana![…] Ary tsy takona afenina intsony izany, rehefa resahin-dry zareo any ivelany any. Any Japana ohatra, tsy hoe tanànan'ny zava-kato ihany i Roma fa “milina mpitsentitra vola” ihany koa.
Mpamaham-bolongana Italiana hafa koa, id: dragor, no nampibaribary ny fomba fijerin'ny Romana sasany izany hoe mpizaha tany.
HO AN'NY ITALIANA ny vahiny dia vondrona vendrana miandry ho ambakaina. Mihevitra ny tenany ho tena fetsy ry zareo fa ny hafa kosa dombo. Ts mampino mihitsy ny hevitra ananan'izy ireo hanambakana ny hafa. […] Fa ny hevitra tsara indrindra hitany hanambakana ny tsirairay matetika dia eo amin'ny vidin-javatra.
Tao amin'ny bar iray tany Roma, dia nangataka kafe erany tamin'ny teny frantsay ny vadiko. Napetrany fa 5 euro ny vidiny. Nanamarika tamin'izy ireo, tamin'nyfitenin'i Dante aho, fa hosoka izao ataon-dry zareo izao dia novaliany hoe: “Tokony niteny taminay avy hatrany ianao fa Italiana. vidiny ho an'ny vahiny izany”.